Poulet farci facile - Nahandro tsotra Malagasy - Laoka malagasy
par Gaël RAKOTOVAO	 5 octobre 2015
Poulet farci facile: akoho nampiarahina amin’ny toto-kena
Fotoana iketrehana azy : 40 mn
thym sy sel sy poivre
huile 2 càs
carotte lehibe 1
rano 2 verres raha poulet de chair ary 6 verres raha akoho gasy
Fikarakarana poulet farci facile
Afangaro ny atsasaky ny ail sy gingembre sy atsasaky ny thym sy sel sy poivre sy huile.
Osorana ny fangaro ny akoho ary tsatohana fourchette hiditra ny tsiro. Avela hilona 4h ary avadibadika.
Tetehana madinika ny nofon-kisoa sy oignon dia afangaro. afangaro ao koa ny ambina ail sy thym sy sel sy poivre.
Asesika anaty akoho ny farce.
Fatorana aminy kofehy ny taolana aminy feny. Ny ahy teto kofehy fanjairana no-tripler-na.
Atao anaty vilany ny akoho efa farci sy marinade nandomana azy sy rano ary carotte vaventy. Avela hiketrika ary avadika rehefa misasaka ny rano ho masaka tsara. Rehefa ritra avela ho mendimendy ny farces rehetra.
cuisine malgache recette, poulet farci a la viande haché, poulet farci malagasy, recette cuisine malgache, recette de cuisine malgache
Article précédent : Gateau au yaourt
Crepe au porc et au fromage à la sauce béchamelArticle suivant :